LienTeh လမ်းညွှန်: COVID-19 ကူးစက်မှုကိုမိသားစုသူနာပြု - LienTeh.net
LienTeh.net > PRnews > LienTeh လမ်းညွှန်: COVID-19 ကူးစက်မှုကိုမိသားစုသူနာပြု
Date：2021-08-28 Views： 199 Times
ရောဂါရှာဖွေခြင်း – ကူးစက်မှုကိုမည်သို့ဆုံးဖြတ်ရမည်နည်း။
Clinical manifestation ရောဂါရှာဖွေခြင်း
ရောဂါမကူးစက်စေရန်ခွဲထားသည့်အချိန်ကာလ: အထီးကျန်ခြင်းနှင့်အထီးကျန်ခြင်း၊ သီးခြားအခန်းသတ်မှတ်ခြင်း။
ပိုးသတ်ဆေးပေးခြင်း: သူနာပြုများသည်မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေးနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအမှိုက်များကိုစွန့်ပစ်ခြင်း
သူနာပြု ၀ န်ထမ်းကာကွယ်မှုလိုအပ်ချက်များ
ပိုးသတ်ဆေးပတ် ၀ န်းကျင်
အရေးပေါ် – အခြားကုထုံး
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (Covid-19) ကပ်ရောဂါကာလအတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည်ရှင်သန်မှုနှုန်းကိုမြှင့်တင်နိုင်ရန်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျသောနိုင်ငံများနှင့်ဒေသများရှိသာမန်လူများအားသူနာပြုအသိပညာပေးသင့်သည်။
ဤလမ်းညွှန်သည်ယာယီလမ်းညွှန်ဖြစ်သည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၏အကူအညီကိုရနိုင်လျှင် ကျေးဇူးပြု၍ ၎င်းကိုမရည်ညွှန်းပါနှင့်။
မူပိုင်ခွင့်：CC BY-NC-SA 4.0
1.၁ ။ ဘာသာပြန်ပါ
2.၂ ။ ပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်း
ဒီလမ်းညွှန်ချက်မှာအသုံးမ ၀ င်တဲ့ပညာရှင်တွေကိုထောက်ပြပြီးပိုပြီးအကောင်ထည်ဖော်နိုင်တဲ့အစီအမံတွေထပ်ထည့်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
3.၃ ။ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ
ဤဆောင်းပါးကိုစက်ဖြင့်ဘာသာပြန်ထားပြီးအတည်မပြုရသေးပါ။ အမှားအယွင်းများရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
ရောဂါရှာဖွေခြင်း - ကူးစက်မှုကိုမည်သို့ဆုံးဖြတ်ရမည်နည်း။
Etiological စစ်ဆေးခြင်း: Coronavirus nucleic acid စမ်းသပ်မှုအသစ် (အပြုသဘောလား။ )
Serological စစ်ဆေးခြင်း: Coronavirus သီးခြား IgM antibody စမ်းသပ်မှုအသစ် (positive လား။ )
Etiological စစ်ဆေးခြင်းCoronavirus nucleic acid အသစ်စမ်းသပ်မှု (positive လား။ )
ရင်ဘတ်ပုံရိပ်ဖော်စစ်ဆေးခြင်း (ရောဂါလက္ခဏာဆန့်ကျင်ဘက် (အဆုတ်အားစုစည်းခြင်း၊ ရှားပါးသော pleural အရည်ထွက်ခြင်း၊ နှလုံးအရိပ်နှင့်အဆုတ်ဖောရောင်ခြင်းရှိမရှိ))
နည်းပညာအခြေအနေများမရှိသောဒေသများအတွက်၊ ၎င်းသည် COVID-19 ကူးစက်ခံရခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်အောက်ပါအဓိကလက္ခဏာများပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ရောဂါမဖြစ်ပွားမီ ၁၄ ရက်အလိုတွင်ရပ်ရွာသတင်းပေးပို့သူ၏ခရီးသွားရာဇ ၀ င်သမိုင်း၊
မစတင်မီ ၁၄ ရက်အလိုတွင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်လူနာသစ်များနှင့်လက္ခဏာမပြသောလူနာများနှင့်အဆက်အသွယ်ရှိခဲ့သည်။
အဖျား (သို့) အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများရှိသောလူနာများသည်ရောဂါမဖြစ်ပွားမီ ၁၄ ရက်အလိုတွင်၎င်း၊
စုဝေးခြင်း (အိမ်၊ ရုံး၊ ကျောင်းအတန်းနှင့်အခြားနေရာများကဲ့သို့ ၁၄ ရက်အတွင်းအဖျားတက်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများ)
အသက်အရွယ်အုပ်စုအားလုံးသည်အဖျားနှင့် / သို့မဟုတ်ချောင်းဆိုးခြင်း၊ အသက်ရှူကျပ်ခြင်း၊ အသက်ရှူကြပ်ခြင်း၊ ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း (သို့) ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း (သို့) စကားမပြောနိုင်ခြင်း (သို့) စကားမပြောနိုင်ခြင်းတို့ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။
1. Covid-19 ၏အဖြစ်များဆုံးလက္ခဏာများမှာအဖျားနှင့် / သို့မဟုတ်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများဖြစ်သည်။
2. အချို့လူနာများတွင်ထိခိုက်နိုင်သောအခြားအဖြစ်များသောလက္ခဏာများမှာ -
အရသာ (သို့) အနံ့ပျောက်ခြင်း
မျက်လုံးနီခြင်း (Conjunctivitis) ဟုလည်းခေါ်သည်။
ကြွက်သား (သို့) အဆစ်များနာကျင်ခြင်း
ပျို့ခြင်း (သို့) အန်ခြင်း
3. ပြင်းထန် Covid-19 ရောဂါ၏လက္ခဏာများမှာ
ရင်ဘတ်၌အမြဲနာကျင်ခြင်း (သို့) ဖိအားများခြင်း
မြင့်မားသောအပူချိန် 38 ၃၈ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
5. ပိုမိုပြင်းထန်။ ရှားပါးသော ဦး နှောက်အာရုံကြောဆိုင်ရာပြဿနာများ၊
1. အသက်ရှူကြပ်ခြင်း (အသက်ရှူနှုန်းမြင့်တက်ခြင်း၊ အသက်ရှူရခက်ခြင်း၊ စတင်အသက်ရှူကူညီခြင်း)
အသက်ရှူနှုန်း (RR) - လူကြီးများ၏ပုံမှန်အသက်ရှူနှုန်းသည် ၁၆ မှ ၂၀ ကြိမ် / မိနစ်၊ ကလေးများသည် ၃၀ မှ ၄၀ ကြိမ် / မိနစ်ဖြစ်သည်။ ကလေးများ၏အသက်ရှူနှုန်းသည်အသက်အရွယ်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှကျဆင်းလာသည်။ RR ကိုကတ်မီတာရေတွက်ခြင်းဖြင့်တိုင်းတာသည်။
အသက် (၁၄) နှစ်အထက်လူကြီးများ: အသက်ရှူကြပ်ခြင်း၊ RR times ၃၀ / မိနစ်
ကလေးများ (အသက် ၁၄ နှစ်အောက်) - အသက်ရှူကြပ်ခြင်း
<၂ လသား၊ RR times ၆၀ ကြိမ် / မိနစ်
အသက် ၂ ~ ၁၂ လ၊ RR ≥ ၅၀ ကြိမ် / မိနစ်
အသက် ၁ ~ ၅ နှစ်၊ RR ။ ၄၀ ကြိမ် / မိနစ်
အသက် ၅ နှစ်၊ RR ။ ၃၀ ကြိမ် / မိနစ်
2. ၃ ရက်ထက်ပိုပြီးဆက်တိုက်အဖျားတက်သည်
အပူချိန် ၃၈ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထက်
အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းခြင်း - အခြားအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများ၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းချို့ယွင်းခြင်းနှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်း
Covid-19 လူနာများအားအိမ်တွင်စောင့်ရှောက်မှုခံယူရန်သီးခြားအခန်းတစ်ခုတွင်သီးခြားထားသင့်သည်။ ဤအရာကိုမလုပ်ဆောင်နိုင်ပါကလူနာများနှင့်အနည်းဆုံး ၁ မီတာအကွာအဝေးတွင်ထားပါ (သီးခြားအခန်းမရှိလျှင်ယာယီသီးခြားအခန်းကိုပလပ်စတစ်စဖြင့်ဖုံးထားနိုင်သည်) ။
ဧည့်သည်တွေကိုအိမ်ထဲကို ၀ င်ခွင့်မပြုသင့်ပါဘူး။ လူနာများနှင့်တစ်ခန်းတည်းနေသူတိုင်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာမျက်နှာဖုံးများတပ်ဆင်သင့်သည်။
ပြတင်းပေါက်ပါသောအခန်းကိုရွေးပါ။ လေ ၀ င်လေထွက်ကောင်းစေရန်ပြတင်းပေါက်များကိုတစ်နေ့အနည်းဆုံးနှစ်ကြိမ်အနည်းဆုံးမိနစ် ၃၀ ကြာတိုင်းဖွင့်ပါ။
မိသားစုတစ်စုလုံး၏အတွင်းဆုံးအခန်းကိုဆိုလိုသည်၊ သီးခြားအခန်းကိုမဖြတ်သန်းဘဲအခြားအခန်းများသို့ ၀ င်ပါ။
လမ်းမဘက်မျက်နှာမူ။ လူအနည်းစုနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်နေသောအခန်းကိုရွေးပါ။ သီးသန့်အခန်းသည်ပြတင်းပေါက် (သို့) ပြတင်းပေါက်အပြင်၊ တံခါးအပြင်၌သတိပေးချက်တင်ရမည်။ Xinguan သီးခြားအခန်းကိုမချဉ်းကပ်ပါနှင့်။
အခန်းထဲတွင်ဆေးပစ္စည်းများ မှလွဲ၍ နေ့စဉ်လိုအပ်သောအ ၀ တ်များကဲ့သို့အဝတ်အစားများမသိမ်းဆည်းပါနှင့်။
အိမ်တွင်အနုတ်လက္ခဏာဖိအားအခန်းတပ်ဆင်ရန်ခက်ခဲသော်လည်း ဦး တည်ချက်အိပ်ဇောပါသောသီးခြားအခန်းကိုတပ်ဆင်နိုင်သည်။
သီးခြားအခန်း၏အဝင်ဝ၌ပလတ်စတစ်ဖျင်သို့မဟုတ်အခြားသိပ်သည်းဆမြင့်သောပစ္စည်းများနှင့်အဖုံးပါရှိသည့်အ ၀ တ်အခန်းကိုခေါင်မိုးမှမြေပြင်အထိအလုံပိတ်ထားရမည်။ သူနာပြုများအ ၀ င်အထွက်လုပ်သည့်အခါပထမတံခါး၏ပထမအလွှာကိုဖွင့်ပါ၊ ပထမတံခါး ၀ င်ကိုကန့်လန့်ကာချထားပါ၊ ထို့နောက်လေ ၀ င်လေထွက်ကိုနှေးစေရန်ဒုတိယတံခါးကိုဖွင့်ပါ။ ကြားခံဧရိယာသည်သူနာပြု ၀ န်ထမ်းများအတွက်အ ၀ တ်များသယ်ဆောင်ရန်နေရာ၊ အဝတ်လျှော်ကြိုး၊ ပိုးသတ်ဆေးသိုလှောင်သည့်အ ၀ တ်နှင့်အ ၀ တ်လျှော်အင်တုံတို့ကိုထည့်ပေးသည်။
တံခါး ၀ င်ပေါက်
အရည်စုပ်ယူနိုင်သော pad ကို air buffer အခန်း၏ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင်ဝါဂွမ်းနှင့်လျှော်နှင့်အခြားပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ တစ် ဦး တည်းကိုပိုးသတ်ဆေးကူညီရန် pad ပေါ်တွင်“ ပိုးသတ်ဆေးပါ ၀ င်သောကလိုရင်း” ကိုသင်ဖြန်းနိုင်သည်။
သရဖူသစ်လူနာများနှင့်အတူအဆောက်အအုံတစ်ခုတွင်သင်နေထိုင်ပါကအိမ်သာတံခါး၏ကြားခံအခန်းကို ထား၍ အိမ်သာထဲသို့ ၀ င်သောအခါမျက်နှာဖုံးကိုတပ်ပါ။ ထို့ပြင်အဆောက်အအုံတစ်ခုလုံးကိုနေထိုင်သူများအားအသိပေးပါ။
ယာယီသိပ်သည်းမှုအခန်းကိုမြင့်မားသောသိပ်သည်းထည်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်(Temporary buffer chamber made of high density fabric)
လျှပ်စစ်ပန်ကာ၏ ဦး တည်ချက်လေ ၀ င်လေထွက်
အိမ်သုံး desktop သုံးလျှပ်စစ်ပန်ကာကိုအိတ်ဇောပန်ကာကဲ့သို့ပြတင်းပေါက်မှန်ကိုဖယ်ရှားပါ၊ တံခါးအောက်တွင်ထောင့်ဖြတ်စတစ်၊ ပန်ကာကိုပြတင်းပေါက်နှင့်ချိတ်ဆက်ပါ၊ ပြတင်းပေါက်ကိုမျက်နှာမူပါ (လေထန်သောဘက်)၊ အိတ်ဇောပြတင်းပေါက်ကိုပွင့်လင်းမြင်သာသောကော်နှင့်အလားတူပစ္စည်းများဖြင့်တံဆိပ်ခတ်ပါ။ ပန်ကာပါဝါနှင့်အနှေးဆုံးဂီယာသို့ချိန်ညှိပါ။
လျှပ်စစ်ပန်ကာမရှိလျှင်၊ အောက်ပါပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်းကျဉ်းမြောင်းသောပြွန်အာနိသင်ကို သုံး၍ ဖန်ဆင်းနိုင်သည်။ ပိုက်အပေါက်ငယ်သည်လေထွက်ပေါက်ဖြစ်ပြီးပိုက်အပေါက်ငယ်သည်ပြတင်းပေါက်မှမျက်နှာမူထားသည်။ ဖြစ်နိုင်လျှင်အထီးကျန်အခန်း၌လေစီးဆင်းမှုကိုအရှိန်မြှင့်ရန်လေပြတင်းပေါက်မှလေ ၀ င်ပေါက်နှင့်အောက်ပြတင်းပေါက်မှလေ ၀ င်ပေါက်နှစ်ခုကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ အပူပိုင်းဒေသများတွင် nped သည်အခန်းတွင်းအပူချိန်ကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
ပိုက်ကျဉ်းအိတ်ဇောပိုက်(Narrow pipe exhaust device，NPED)
COVID-19 လူနာများအိမ်တွင်စောင့်ရှောက်မှုခံယူနေရသူသည်သီးခြားခွဲထားသင့်သည်။ ရောဂါလက္ခဏာများရှိသူများသည်ရောဂါပျောက်ကင်းသည်အထိရောဂါလက္ခဏာများပျောက်ကင်းသည်အထိအနည်းဆုံး ၁၀ ရက်သီးခြားနေသင့်ပြီးရောဂါလက္ခဏာပြီးဆုံးပြီးနောက်နောက်ထပ် ၃ ရက်သီးခြားခွဲထားသင့်သည်။ အထီးကျန်စံသတ်မှတ်ချက်များ၏အဆုံး
အဖျားမရှိသော်လည်း ၃ ရက်ထက်ကျော်။ ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သည်
အဆုတ်ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်းသည်စူးရှသော exudative lesions များကိုသိသိသာသာတိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည်။
အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာနမူနာများကို nucleic acid စစ်ဆေးမှုသည်နှစ်ကြိမ်ဆက်တိုက်အနုတ်လက္ခဏာပြခဲ့သည် (နမူနာယူချိန်သည်အနည်းဆုံး ၂၄ နာရီ)
nucleic acid စမ်းသပ်မှုအဖြေရပြီး ၁၀ ရက်အကြာတွင်ရောဂါလက္ခဏာမပြသောသူများကိုသီးခြားခွဲထားသင့်သည်။
1. သူနာပြု ၀ န်ထမ်းများ
လူနာများကိုသာဆက်သွယ်နိုင်သောလွတ်လပ်သောသူနာပြု ၀ န်ထမ်းကိုခန့်ထားပါ။ ဖြစ်နိုင်လျှင်သူနာပြု ၀ န်ထမ်း ဦး ရေကိုအခြေခံရောဂါမရှိသူများအားကန့်သတ်ပါ။
လူနာသည်ဟင်းလျာများ၊ တုတ်ရှည်များ၊ ခွက်များ၊ အိုးများနှင့်အိပ်ယာများကိုအစုံပြင်ဆင်သည်။ လူနာ၏အစာကိုလူနာမှသာ သုံး၍ သီးခြားသန့်စင်နိုင်သည်။ ပိုးသတ်ဆေးပါသောကလိုရင်းမရှိလျှင်သီးခြားအိုးကိုပိုးသတ်ဆေးအိုးအဖြစ် သုံး၍ ဤနေ့စဉ်လိုအပ်ချက်များကိုရေနွေးဖြင့်ပြုတ်ပါ။
လူနာများ၏နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်များကို ၁၀ မိနစ် (၁၀၀ မိနစ်) ရေနွေးဖြင့်ပြုတ်သင့်သည်။ ဤနည်းလမ်းကိုယေဘူယျခွဲစိတ်ကိရိယာများ၊ ရာဘာပြွန်များနှင့်ဆေးထိုးအပ်များ၊ သောက်ရေနှင့်ပန်းကန်ခွက်ယောက်များကိုပိုးသတ်ရန်သုံးသည်။
သူနာပြု ၀ န်ထမ်းများသည်သီးခြားအကာအကွယ်ဧရိယာသို့ ၀ င်သောအခါအောက်ပါအကာအကွယ်ပစ္စည်းများကို ၀ တ်ဆင်ရမည်။
N95 အထက်ရှိဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကာအကွယ်မျက်နှာဖုံး (အခြားရွေးချယ်စရာ-အလွှာ ၁၈ လွှာခန့်ရှိသောပိတ်ကျဲစသို့မဟုတ်ဝါဂွမ်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောမျက်နှာဖုံး)
မျက်မှန် (အခြားနည်းလမ်း - ရေကူးမျက်မှန်)
အကာအကွယ်မျက်နှာမျက်နှာပြင် (အစားထိုး၊ ဆိုင်ကယ် ဦး ထုပ်)
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကာအကွယ်အ ၀ တ်များ (ပလပ်စတစ်မိုးကာအင်္ကျီ)
တစ်ခါသုံး nitrile ရော်ဘာလက်အိတ်များ (ပန်းကန်ဆေးရန်ပလပ်စတစ်လက်အိတ်)
အထူးအလုပ်ဖိနပ် (ရာဘာဘွတ်ဖိနပ်) (အစားထိုးမိုးရေဖိနပ်)
အစားထိုးအစီအစဉ်ကိုလက်ခံကျင့်သုံးသောအခါလက်အိတ်များ၊ မိုးကာအင်္ကျီများ၊ ဖိနပ်အိတ်များစသည်တို့ကိုကွက်လပ်များမထားခဲ့ဘဲပွင့်လင်းသောတိပ်ဖြင့်အုပ်ပါ။
သန့်ရှင်းသောနေရာတွင်ကိုယ်ပိုင်အဝတ်အစားများနှင့်အသုံးအဆောင်များကိုဖယ်ရှားပါ။ ခွဲစိတ်ခန်းအ ၀ တ်များနှင့်လျှော်နိုင်သောအလုပ်ဖိနပ် (ပလပ်စတစ် (သို့) ရော်ဘာ) သို့ပြောင်းပါ။
ကိုယ်ပိုင်အကာအကွယ်ပစ္စည်းများ ၀ တ်ဆင်ထားသောနေရာကို ၀ င်ပါ။ (အိမ်သာ၊ အိမ်သာ)
လက်ကိုသန့်ရှင်းပါ (အခြားနည်းလမ်း - ဆပ်ပြာနှင့်ရေတို့ဖြင့်ဆေးပါ)
တစ်ခါသုံးအလုပ်ထုပ်ကို ၀ တ်ပါ။ (ဆံပင်နှင့်နားရွက်များကိုတစ်ခါသုံးပလပ်စတစ်အိတ်ဖြင့်ဖုံးပါ)
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကာအကွယ်မျက်နှာဖုံး Wear အခြားနည်းလမ်း - မျက်နှာဖုံးကိုပိတ်စ (သို့) အလွှာ ၁၈ လွှာခန့်နှင့်ပြုလုပ်ပါ။ )
တစ်ခါသုံးဆေးဘက်ဆိုင်ရာလက်အိတ်များ (အစေးသို့မဟုတ်နိုက်ထရီးလ်) ကိုအသုံးပြုပါ (ပန်းကန်ဆေးရန်ပလပ်စတစ်လက်အိတ်)
တစ်ခါသုံးယိုစိမ့်မှုမှကာကွယ်ရန်အ ၀ တ်များ (လိုအပ်လျှင်ရေစို ၀ တ်ပါစထရမ့်) (အခြားရွေးချယ်စရာ-မိုးဖိနပ်)
လိုအပ်လျှင်တစ်ခါသုံးရေစိုခံအဖုံးများနှင့်ရေစိုခံဘွတ်ဖိနပ်များကို ၀ တ်ပါ။
တစ်ခါသုံးအကာအကွယ်မဲ့မျက်နှာပြင် (၀ တ်၊ ဆိုင်ကယ် ဦး ထုပ်)
တစ်ခါသုံး nitrile လက်အိတ်များ (ပန်းကန်ဆေးရန်ပလပ်စတစ်လက်အိတ်) ကို ၀ တ်ပါ။
buffer zone ကို unloading area အဖြစ်သုံးသည်။ အဖုံးများပါ ၀ င်သောအထူးပလပ်စတစ်ပုံးနှစ်လုံးကိုနေရာဖယ်ထုတ်ရန်ပြင်ဆင်သည်။ ပြန်မတင်ရသေးသောအကာအကွယ်ပစ္စည်းများအတွက်တစ်ခါသုံးအသုံးအဆောင်များအတွက်ရေပုံးတစ်ပုံးနှင့်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောပစ္စည်းများအတွက်အခြားရေပုံး
Disposable Nitrile လက်အိတ်များကိုပိုးသတ်ပါ။ (သီးခြားအခန်းမှမထွက်မီ ၁။ လက်ကို talcum အမှုန့်နှင့်ပွတ်ပါ။ ၂။ လက်ကိုပုံမှန်ဆားရည်ဖြင့်ဆေးပါ။ ပုံမှန်ဆားရည်၏ ၀.၉%၊ ဆိုဒီယမ် ၀.၉ ဂရမ်တွင် ၁၀၀ မီလီလီတာပါ ၀ င်သည်။ ပုံမှန်ဆားရည်
အထီးကျန်အခန်းမှထွက်ခွာ။ တစ်ခါသုံးရေစိုဖျာဖြင့်ဖြန့်ခင်းထားသောနေရာသို့ ၀ င်ပါ။
တစ်ခါသုံး Nitrile လက်အိတ်များကိုဖယ်ရှားပါ။
တစ်ခါသုံးယိုစိမ့်ယိုစိမ့်မှုကြောင့်တွဲကျနေသောအကာအကွယ်အ ၀ တ်များ (ပထမရေစိုဝတ်ခါးစောင်ကိုချွတ်ပါ) နှင့်တစ်ခါသုံးရေစိုခံအဖုံး (သို့မဟုတ်ရေစိုခံဘွတ်) ကိုချွတ်ပါ။
ထို့နောက်လျှော်နိုင်သောအလုပ်ဖိနပ်များကိုပိုးသတ်ပါ။ (ibid ။ 1)
လက်သန့်ရှင်းရေး （အခြားနည်းလမ်း - ပုံမှန်ဆားရည် / ဆပ်ပြာနှင့်ရေတို့ဖြင့်ဆေးပါ။ ပိုးသတ်ဆေး ၇၅% အရက်ဖြင့်ဖြန်းပါ။
ခွဲစိတ်ခန်းသုံးအ ၀ တ်များနှင့်အလုပ်ဖိနပ်များဝတ်ဆင်ပြီးအကာအကွယ်ပစ္စည်းများကိုထုတ်လွှင့်သည့်နေရာတွင်ထားခဲ့ပါ။
တစ်ခါသုံးဆေးဘက်ဆိုင်ရာအမှိုက်များသည်အပူချိန်မြင့်ရေနွေးငွေ့ပိုးသတ်ခြင်းနည်းပညာလိုအပ်သည်။ ၎င်းကိုအထူးသံမဏိသံမဏိသေတ္တာတစ်ခုတွင်ထည့်ပြီးအပူချိန်မြင့်ပိုးသတ်သေတ္တာထဲသို့တွန်းထည့်ပြီး 220 kPa ဖိအားနှင့်အမြင့်ဆုံးအပူချိန် 134 of အောက်တွင် ၄၅ မိနစ်ကြာပိုးသတ်ထားသည်။ ဦး ထုပ်၊ မျက်မှန်နှင့်အခြားပစ္စည်းများကိုပိုးသတ်ဆေး (၁၀၀၀ မီလီဂရမ် / လီတာ) ပါ ၀ င်သော chlorine ဖြင့်သန့်စင်ပြီးအသုံးမပြုမီအခြောက်ခံပါ။
အခြားနည်းလမ်း - သုံးပြီးသားတစ်ခါသုံးပလတ်စတစ်အိတ်များကိုအထူးမီးထိုးစက်ဖြင့်မီးရှို့ရမည်။ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောအကာအကွယ်ပစ္စည်းများကိုအထူးအိုးတစ်လုံး၌ ၄၅ မိနစ်ခန့်ပြုတ်ရမည်။ ခမောက်ကဲ့သို့ပြုတ်။ မရနိုင်သောပစ္စည်းများအတွက်ပိုးသတ်ဆေးအရက်ကိုဖြန်းပြီးနေရောင်တွင် ၄၅ မိနစ်ထားပါ။
1. ခရမ်းလွန်မီးအိမ် (ရှိလျှင်)
ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေးပိုးသတ်ခြင်း၊ ထိရောက်သောအကွာအဝေးသည် 2M ထက်မပိုစေရ၊ အချိန်သည်မိနစ် ၃၀ မှ ၆၀ မိနစ်ဖြစ်ရမည်။ ဆီမီးခွက်သည်အပူပေးထားရန်လိုအပ်သောကြောင့်မီးအိမ်ဖွင့်ပြီးနောက် ၅-၇ မိနစ်မှစတင်ပါ၊ ၎င်းသည်အိုဇုန်းလွှာထုတ်ရန်လေထု၌အောက်ဆီဂျင်ကိုဓာတ်ပြုရန်အချိန်တစ်ခုကြာသည်။
ဆောင်းပါးများအားပိုးသတ်ခြင်း၊ ဓာတ်ရောင်ခြည်ဖြာခြင်းသည် ၂၅-၆၀ စင်တီမီတာအကွာအဝေးတွင်မိနစ် ၂၀ မှ ၃၀ မိနစ်ဖြစ်သည်။
အိမ်သာ၊ ထိုင်ခုံများ၊ တံခါးလက်ကိုင်များ၊ ပရိဘောဂမျက်နှာပြင်များ၊ ကောင်တာများစသည်တို့ကိုပိုးသတ်ဆေးပါသောကလိုရင်း (500mg / L) ဖြင့်သုတ်ပါ။
ကြားခံဇုန်၏ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင်ဖလိုရိုက်ပိုးသတ်ဆေး (500mg / L) ကိုဖြန်းပါ။
chlorinated ပိုးသတ်ဆေးများအပါအ ၀ င်
ပိုးသတ်ဆေး ၈၄ မျိုး၊ sodium hypochlorite (NaClO) ကို ၅.၅% ~ ၆.၅% နှင့်ပြင်ဆင်ထားသည်။ Hypochlorous acid water သည်အိမ်တွင်းလေ၊ လက်များ၊ အရေပြား၊ အကျိအချွဲများနှင့်ဒုတိယရေပေးဝေရေးပစ္စည်းများမျက်နှာပြင်ကိုပိုးသတ်ရန်သုံးနိုင်သည်။
အရောင်ချွတ်ဆေးဖြင့်အရည် (အစားထိုး၊ အရေပြားကိုမထိပါနှင့်)
သို့မဟုတ်ပိုးသတ်ဆေးအမှုန့်ပါ ၀ င်သောအခြားကလိုရင်း၊ အရည်ညှစ်ဆေးပြားများပါ ၀ င်သောကလိုရင်း
ယေဘူယျအရာဝတ္ထုမျက်နှာပြင်: ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းပိုးသတ်နေစဉ် ၂၅၀ မှ ၅၀၀ မီလီဂရမ် / လီတာထိရောက်သောပိုးသတ်ဆေးကိုပိုးသတ်ထားသောအရာဝတ္ထုများ၏မျက်နှာပြင်များပေါ်တွင် ၁၀-၃၀ မိနစ်ခန့်သုတ်ရန်၊ စိမ်ရန်နှင့်ဖြန်းရန်သုံးနိုင်သည်။ ပိုးမွှားများကိုသုတ်ခြင်း၊ ရေစိမ်ခြင်းနှင့်ပိုးသတ်ဆေးဖျန်းခြင်းတို့ကိုထိရောက်သောကလိုရင်းပမာဏ ၁၀၀၀-၂၀၀၀ မီလီဂရမ် / ၁၀ မိနစ်မှ ၁၀-၃၀ မိနစ်၊ အရာဝတ္ထုမျက်နှာပြင်ကိုသွေးနှင့်ချွဲကဲ့သို့အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများဖြင့်ညစ်ညမ်းစေသောအခါပိုးသတ်ဆေး၏ထိရောက်သောကလိုရင်းပမာဏကို ၂၀၀၀ မှ ၁၀၀၀ မီလီဂရမ် / လီတာအထိမြင့်တက်စေနိုင်သည်။
ပန်းကန်ခွက်ယောက်များကြိုတင်ကာကွယ်ရန်ပိုးသတ်ဆေးကိုမထောက်ခံပါ။ ကူးစက်ရောဂါရှိသောလူနာများအသုံးပြုသောပန်းကန်ခွက်ယောက်များကိုသန့်ရှင်းရေးအခြေခံအားဖြင့်မိနစ် ၂၀ တွင် ၂၅၀ မီလီဂရမ် / လီတာနှင့်ပိုးသတ်ဆေးဖြင့်စိမ်ပြီးပိုးသတ်နိုင်သည်။ ပိုးသတ်ပြီးနောက်ပိုးသတ်ထားသောပိုးသတ်ဆေးကိုသန့်ရှင်းသောရေဖြင့်ဆေးပါ။
ထည်:ကြိုတင်ကာကွယ်ရန်ပိုးသတ်ဆေးအတွက်ထိရောက်သောကလိုရင်းပါဝင်မှုသည် ၂၅၀-၄၀၀ မီလီဂရမ် / L. ပိုးသတ်ဆေးတွင်အ ၀ တ်ကိုမိနစ် ၂၀ ထားပါ။ ပိုးသတ်ပြီးနောက်ပိုးသတ်ထားသောပိုးသတ်ဆေးကိုသန့်ရှင်းသောရေဖြင့်ဆေးပါ။ ကူးစက်ရောဂါပိုးမွှားများ ၀ င်ရောက်နေသောအ ၀ တ်များအားပိုးသတ်ခြင်းအတွက်ပိုးသတ်ထားသောပိုးသတ်ဆေးကို ၅၀၀ မီလီဂရမ် / လီတာရှိသောပိုးသတ်ဆေးကိုမိနစ် ၃၀ ကြာနှစ်မြှုပ်ရန်သုံးနိုင်သည်။ ပိုးသတ်ပြီးနောက်ပိုးသတ်ထားသောပိုးသတ်ဆေးကိုသန့်ရှင်းသောရေဖြင့်ဆေးပါ။
အသီးအနှံနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ:ကြိုတင်ကာကွယ်သည့်ပိုးသတ်ဆေးကိုသစ်သီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုအရင်ဆေးကြောပါ၊ ထို့နောက်ရေစိမ်၊ သုတ်ပါ၊ ပိုးသတ်ဆေးဖြင့်ထိရောက်သော ၁၀၀-၂၀၀ မီလီဂရမ် / လီတာကို ၁၀ မိနစ်ထားပြီးပိုးသတ်ပြီးနောက်သန့်ရှင်းသောရေဖြင့်ဆေးပါ။
ရေ:ပိုးသန့်ပိုး (၀.၅ မှ ၁၀ ဂရမ်ခန့်) ပါ ၀ င်သောကလိုရင်းပမာဏကိုထည့်ပြီးမိနစ် ၃၀ အကြာတွင်ကျန်ရှိသောကလိုရင်းကို ၀.၃ မှ ၀.၅ မီလီဂရမ်/လီတာတွင်ထည့်ပါ။ သောက်ရေသန့်ပိုးသတ်ဆေးသောက်လျှင်ပိုးသတ်ပြီးနောက်ရေ၏အရည်အသွေးသည်သောက်ရေစံချိန်စံညွှန်းနှင့်အညီဖြစ်ရမည်။
လေကြောင်း:ယေဘူယျအားဖြင့်ပြောရမည်ဆိုလျှင် hypochlorous acid water မှလွဲ၍ အခြားပိုးသတ်ဆေးများကိုလေသန့်စင်ရန် သုံး၍ မရပါ။ ညစ်ညမ်းမှုအရင်းအမြစ်ကိုဖယ်ရှားပါ၊ တံခါးများနှင့်ပြတင်းပေါက်များကိုပိတ်။ မူလမရှိသောအခါ 10-20ml / m သို့လျှော့ချရန်အထူး aerosol atomizer နှင့်ပေါင်းစပ်ပြီး hypochlorous acid aqueous solution ကိုသုံးပါ။ ဆေး၊ ပိုးသတ်ဆေးဖြန်းခြင်း၊ မိနစ် ၃၀ ကြာအသုံးပြုနိုင်သည်။
လက်:ယေဘူယျအားဖြင့် hypochlorite water မှလွဲ၍ ပိုးသတ်ဆေးများပါ ၀ င်သောအခြားကလိုရင်းကိုလက်သန့်စင်ရန် သုံး၍ မရပါ။ Hypochlorous acid aqueous solution ကို 150mg / ထိရောက်သောအာရုံစူးစိုက်မှုဖြင့်သုံးသည်။ လက်ကိုပိုးသတ်ခြင်း - ပိုးသတ်ရန်အစိတ်အပိုင်းများကိုအဖုံးအုပ်ရန် (သို့) နှစ်မြှုပ်ရန်လုံလောက်သောပိုးသတ်ဆေးကိုအလုံအလောက်ယူပါ။ ခွဲစိတ်လက်သန့်စင်ခြင်း - ခွဲစိတ်လက်ဖြင့်ဆေးပြီးနောက်သင့်တော်သောပိုးသတ်ဆေးပမာဏကို ယူ၍ လက်၊ လက်ဖျံနှင့်လက်မောင်းအောက်အရေပြားပေါ်တွင် ၃ မိနစ်ထားပါ။
အရေပြားနှင့်အကျိအချွဲ ယေဘူယျအားဖြင့် hypochlorous acid water မှလွဲ၍ ပိုးသတ်ဆေးပါ ၀ င်သောအခြားကလိုရင်းကိုအရေပြားနှင့်အမြှေးပါးများကိုပိုးသတ်ရန် သုံး၍ မရပါ။ hypochlorous acid aqueous solution ကို ၁၀၀ မီလီဂရမ် / L ထိရောက်မှုရှိသောဆေးရည်ကိုအဖုံးမအုပ်မချင်းပိုးသတ်ဆေးဖြန်းရန်၊ ပိုးသတ်ထားသောစိမ်ထားသောပိုးသတ်ထားသောစေး (သို့) ပိုးသတ်ထားသောဂွမ်းစဖြင့်သုတ်ပါ။
1. သာမိုမီတာ၊ sphygmomanometer၊ အောက်ဆီဂျင်တိုင်နှင့်အခြားကိရိယာများ (ရှိလျှင်)
သာမိုမီတာကို ၇၅% အရက် ၁ မိနစ်နှင့်စိမ်ပါ။
မစိမ်နိုင်သောပစ္စည်းများအတွက် ၁ မိနစ် ၇၅% အရက်ဖြင့်သုတ်ပါ။
2）လူနာများအတွက်အထူးပန်းကန်ခွက်ယောက်များ၊ ပန်းကန်များ၊ ခွက်များ၊ ပန်းကန်ခွက်ယောက်များစသဖြင့်အောက်ပါနည်းလမ်းများဖြင့်ပိုးသတ်ရမည်။
ပိုးသတ်ဆေးကို ၂၅၀ မီလီဂရမ် / L ထိရောက်မှုရှိသောပိုးသတ်ဆေးကိုမိနစ် ၂၀ ကြာစိမ်ပြီးကျန်ပိုးသတ်ဆေးကိုသန့်ရှင်းသောရေဖြင့်ဆေးပါ။ ဒါမှမဟုတ်၊
ဆပ်ပြာရည်ဖြင့်ဆေးပါ၊ ထို့နောက်သန့်ရှင်းသောရေဖြင့်သုတ်ပါ၊ အထူးအပူချိန်မြင့်အိုးတွင် ၁၀ မိနစ်ခန့်ပြုတ်ပါ
မျက်နှာသုတ်ပုဝါ၊ အိပ်ယာခင်း၊ အိပ်ယာနှင့်အခြားအ ၀ တ်များကိုပိုးသတ်ဆေးရည်တွင် ၅၀၀ မီလီဂရမ် / လီတာအထိထိရောက်စွာမိနစ် ၃၀ ထားရမည်။ ပိုးသတ်ပြီးနောက်ပိုးသတ်ထားသောပိုးသတ်ဆေးကိုသန့်ရှင်းသောရေဖြင့်ဆေးပါ။
အများအားဖြင့်လူနာအားပါးလွှာသောအသားရည်နှင့် / သို့ ၂၀၀၀ မီလီလီတာတိုင်းပိုးသတ်ရန် ၂၀၀၀ မီလီဂရမ် / လီတာပိုးသတ်ဆေးရည် ၂၀၀၀ မီလီဂရမ်နှင့်ပိုးသတ်ဆေးရည်ကိုထည့်နိုင်သည်။
New Coronavirus အဆုတ်ရောင်လူနာများအားစွန့်ထုတ်ခြင်းနှင့်အော့အန်ခြင်းကိုအရောင်တင်အမှုန့် ၁၀၀ ဂရမ် (သို့) ၂၀၀၀ မီလီလီတာတွင်ထိရောက်သောကလိုရင်း (bromine) ၂၀၀၀၀ မီလီဂရမ်/လီပိုးပါ ၀ င်သောထည့်နိုင်သည်။
viscous secretions နှင့် / သို့မဟုတ် excretions များအတွက်ထိရောက်သော chlorine concentration 50000mg / l ကိုသုံးနိုင်သည်။ ပိုးသတ်ဆေး၏အစိတ်အပိုင်း ၂ ခုနှင့်အညစ်အကြေးများနှင့် / သို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုရောမွှေပြီးမွှေပြီးမိနစ် ၁၂၀ ကျော်မတ်တပ်ရပ်ပါ။
အမှိုက်များကိုအပြင်ဘက်တွင်မီးရှို့ဖျက်ဆီးနိုင်သည်။ (ရေအရင်းအမြစ်နှင့်ဝေးဝေးထားပါ) ။
ပြန်လည်အသုံးပြုရန်လိုအပ်သောနေ့စဉ်သုံးပစ္စည်းများနှင့်အကာအကွယ်ပစ္စည်းများကိုအထူးအိုးတစ်လုံးတွင် ၁၀ မိနစ်ခန့်ပြုတ်ရမည်။
မပြုတ်နိုင်သောပစ္စည်းများအတွက်ပိုးသတ်ဆေးအရက်ကိုဖြန်းပြီးနေရောင်တွင် ၄၅ မိနစ်ထားပါ။
ထိုကဲ့သို့သောအညစ်အကြေးများကိုကိုင်တွယ်ရန်ဒေသခံလူထုကျန်းမာရေးစနစ်မရှိလျှင်သေတ္တာတစ်လုံးကိုပြင်ဆင်ပါ၊ တွင်းကိုတူးပါ။ သူတို့ကိုမြေတွင်း၌သင်္ဂြိုဟ်ပါ။
ထုံးဓါတ်ဖြန်းပြီးနောက်သေတ္တာကိုပိတ်ပါ (သို့) မြေကြီးဖြင့်ဖြည့်ပါ
အပေါ်ဆုံးအလွှာ: hydrated lime (hydrated lime)
အလယ်လွှာ ၁: ကျောက်စရစ်ခဲအလွှာ (လက်သီးအရွယ်ကျောက်စရစ်ခဲ)
အလယ်အလွှာ ၂ - မီးသွေးအလွှာ (အလိုအလျောက်ပစ်ခတ်သည်)
အနိမ့်ဆုံးအလွှာ - သဲနှင့်ကျောက်စရစ် (လက်ညှိုးအရွယ်အစားကျောက်စရစ်)
ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျသူများ၏ရုပ်အလောင်းများရှိလျှင်၎င်းတို့အားအထက်ပါနည်းအတိုင်းမီးရှို့ရန် (သို့) သင်္ဂြိုဟ်ရန်လိုအပ်သည်။
Electrolyte လက်ကျန်: ဓာတ်ဆားရည်ကိုအနည်းငယ်ယူနိုင်သည်
ပေါ့ပါးသောအစားအစာ - ပရိုတင်းဓာတ်ရရှိစေရန်ကြက်ဥ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်သစ်သီးဖျော်ရည်စသည်ဖြင့်သင်စားနိုင်သည်။
ဖြည့်စွက်စာများ - ဗီတာမင်မျိုးစုံ၊ ဗီတာမင်စီ၊ ဇင့်အာဟာရ၊ nicotinic အက်စစ်ဖြည့်စွက်စာစသည်
3. အပူချိန်ထောက်လှမ်းခြင်း ပုံမှန်အပူချိန်အကွာအဝေးသည် ၃၆ ဒီဂရီ ၂ မှ ၃၇ ဒီဂရီ
Axillary ပြဒါးတိုင်၊ ၅ မိနစ်ခန့်တိုင်းတာသည်။
အဖျားကြီးသောအခြေအနေ-ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကို ၁-၂ နာရီတိုင်းတိုင်းတာပြီးတိုင်းတာနေစဉ်အချိန်နှင့်အပူချိန်ကိုမှတ်တမ်းတင်ပါ။
အဖျားမကြီးပါနှင့်၊ ကိုယ်အပူချိန်ကို ၄ နာရီတိုင်းတိုင်းပါ။
အမေရိကန်၊ ဥရောပသမဂ္ဂ၊ တရုတ်၊ ဂျပန်နှင့်အိန္ဒိယတို့တွင်ခွင့်ပြုချက်နှင့်လက်တွေ့ဆေးစာရင်းအပါအ ၀ င်အောက်ဖေါ်ပြပါဆေးဝါးစာရင်းကိုပြည်တွင်း၌အတည်ပြုခြင်းမပြုနိုင်ပါ။ သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကိုမရနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်အောက်ပါစာရင်းသည်ရည်ညွှန်းရန်သာဖြစ်သည်။
တစ်ပြိုင်နက်တည်းဗိုင်းရပ်စ်ဆေးသုံးမျိုးထက်ပိုသုံးရန်မထောက်ခံပါ။ သည်းမခံနိုင်သောအဆိပ်နှင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများရှိပါကသက်ဆိုင်ရာဆေးဝါးများသုံးစွဲခြင်းကိုရပ်တန့်သင့်သည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်လမစေ့ဘဲလူနာများအတွက်ကုသမှုအတွက်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရက်သတ္တပတ်များကိုစဉ်းစားသင့်သည်၊ သန္ဓေသားအပေါ်သက်ရောက်မှုအနည်းငယ်ရှိသည့်ဆေးများကိုရွေး။ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ခြင်းကိုကုသသင့်သလားကိုစဉ်းစားပြီးသူတို့ကိုအသိပေးပါ။
အောက်ပါတို့သည် (၁-၆) စျေးနှုန်းနှင့်အတော်အတန်ရနိုင်သောစျေးကွက်တွင်နှစ်ပေါင်းများစွာရှိနေသောဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဆေးဝါးများဖြစ်သည်။
လူကြီးများအတွက်တစ်ကြိမ်လျှင် ၅ သန်း U သို့မဟုတ်ညီမျှသောပမာဏ၊ ပိုးသတ်ထားသောရေ ၂ မီလီလီတာကိုတစ်နေ့နှစ်ကြိမ်ထည့်ပါ၊ ရှူရှိုက်မိပါကကုသမှု ၁၀ ရက်ထက်မပိုစေရ။
Ribavirin အရွယ်ရောက်သူ ၅၀၀ မီလီဂရမ် / ကြိမ်၊ အကြောသွင်းဆေးတနေ့ ၂ ကြိမ်မှ ၃ ကြိမ်၊ ကုသမှုသင်တန်းသည် ၁၀ ရက်ထက်မပိုစေရ။
Lopinavir/ritonavir အရွယ်ရောက်သူတိုင်း 200mg/50mg/capsule၊ တစ်ကြိမ်လျှင် ၂ တောင့်၊ တစ်နေ့နှစ်ကြိမ်။
Novel coronavirus pneumonia, Lopinavir/Ritonavir ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးတံဆိပ် Kaletra သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၄ ရက်နေ့တွင် AbbVie ၏အဆိုအရ AbbVie သည် Kaletra (Lopinavir/Ritonavir) မူပိုင်ခွင့်သစ်ကို ၀ မ်းရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကပ်ရောဂါအသွင်ဆောင်သောဆေးဝါးထောက်ပံ့မှုရှားပါးမှုကိုစွန့်ပစ်ခဲ့သည်။
ပေါင်းစပ်အသုံးပြုမှု - အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက် ribavirin 500mg / ကြိမ်၊ အကြောသွင်းဆေးတနေ့ ၂ ကြိမ်မှ ၃ ကြိမ်၊ ကုသမှုသင်တန်းသည် ၁၀ ရက်ထက်မပိုစေရ။
အသက် ၁၈ မှ ၆၅ နှစ်ကြားလူကြီးများအတွက် ၅၀ ကီလိုဂရမ်ထက်ပိုသောသူများအတွက် ၅၀၀ မီလီဂရမ်ကိုတစ်နေ့နှစ်ကြိမ် ၇ ရက်၊ ကိုယ်အလေးချိန် ၅၀ ကီလိုဂရမ်ထက်နည်းပါကပထမနှင့်ဒုတိယရက်များတွင် ၅၀၀ မီလီဂရမ်၊ တစ်နေ့နှစ်ကြိမ်၊ တတိယအကြိမ်မှခုနစ်ရက်မြောက်နေ့တွင် ၅၀၀ မီလီဂရမ်၊ တစ်နေ့တစ်ကြိမ်၊
အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ၂၀၀ မီလီဂရမ်ကိုတစ်နေ့ ၃ ကြိမ်၊ ကုသမှုသည် ၁၀ ရက်ထက်မပိုစေရ။
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၉ ရက်နေ့တွင်ပြင်သစ်သိပ္ပံပညာရှင် Didier raoulta ကို peer-reviewed သိပ္ပံဂျာနယ် International antimicrobial agents မှလက်ခံခဲ့သည်။ ဆေးသုတေသနစာတမ်းတစ်စောင်က hydroxychloroquine sulfate သည် covid-2019 လူနာများအတွက်သိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။
Covid-2019 လူနာ ၃၆ ဦး ပါဝင်သောလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတစ်ခုတွင် (၆ လက္ခဏာ၊ ရောဂါလက္ခဏာ ၆ ခု၊ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းအပေါ်ပိုင်းရောဂါလက္ခဏာ ၂၂ ချက်နှင့်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းအောက်ပိုင်းကူးစက်မှုလက္ခဏာ ၈ ခု) တွင်လူနာများသည် nasopharyngeal swab virus ၏အနုတ်လက္ခဏာနှုန်းကို ၆: ၁၀၀ တွင်ကုသပေးခဲ့သည်။ hydroxychloroquine နှင့် Azithromycin; လူနာ ၅၇.၁% သည် hydroxychloroquine monotherapy ကိုသာရရှိခဲ့သည်။ ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုသည် ၁၂.၅% (P <0.001) ဖြစ်ပြီးလက္ခဏာပြလူနာများ၏ဆေး၏ထိရောက်မှုသည်လက္ခဏာမပြသောလူနာများထက်ပိုမိုသိသာထင်ရှားသည်။
ဤလက်တွေ့စမ်းသပ်မှု၏အကြီးမားဆုံးတိုးတက်မှုနှင့်ယခင်တစ်ခုက macrocyclic lipid antibiotic azithromycin နှင့်ပေါင်းစပ်လိုက်သောအခါဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေး၏ထိရောက်မှုသည်သိသိသာသာမြင့်မားလာသည်ကိုတွေ့ရသည်။ စာရင်းသွင်းပြီးနောက်တတိယမြောက်နေ့၌ပင်အနုတ်လက္ခဏာသို့ပြောင်းသွားပြီးခြောက်ရက်မြောက်တွင်အပျက်သဘောဆောင်သည်၊ ၎င်းသည်ယခင်စာပေ၌အစီရင်ခံသောအချိန်ထက်ပိုတိုသည် (covid -19၊ တရုတ်လူနာများတွင်ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုပျမ်းမျှပျမ်းမျှရက် ၂၀) ရှိသည်။ အရှည်ဆုံးကြာချိန်သည် ၃၇ ရက်ပင်ဖြစ်သည်။ )
hydroxychloroquine ထိုးဆေးကို ၂၀၀ မီလီဂရမ်၊ တနေ့ ၃ ကြိမ် ၁၀ ရက်။
azithromycin ၏ဆေးပမာဏကို ၁ ရက်မှ ၅၀၀ မီလီဂရမ်နှင့် ၂ ရက်မှ ၄ ရက်အတွင်းနေ့စဉ် ၂၅၀ မီလီဂရမ်
အောက်ပါအကြောင်းအရာ [၇-၁၂] သည် COVID-19 ကူးစက်မှုကိုကုသရန်အထူးတီထွင်ထားသောဆေးစာရင်းသစ်ဖြစ်သည်။ [၇-၁၁] အများစုမှာဇီဝဆေးများနှင့်ဆေးထိုးရန်ပြင်ဆင်မှုများဖြစ်သည်။ သူတို့သည်များသောအားဖြင့်အအေးကွင်းဆက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်သိုလှောင်မှုကိုလိုအပ်သည်။ ၁၂၊ ပါးစပ်ပြင်ဆင်မှုများကိုသယ်ဆောင်ပြီးအခန်းအပူချိန်တွင်သိုလှောင်နိုင်သည်။
Casirivimab & imdevimab ကိုအမေရိကန်တွင် regen-cov သည်နှင့်အခြားနိုင်ငံများနှင့်ဒေသများတွင် ronapreve ဟုခေါ်သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ် ၀၇ ရက်၊ ၂၀ ရက်၊ MHLW သည် Ronapreve အားအကြောဆေးသွင်းခြင်းမှတဆင့် COVID-19 ကူးစက်လူနာများကိုကုသရန်အတည်ပြုခဲ့သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက်နေ့တွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု FDA မှ Covid-19 antibody ကော့တေးကုထုံးအတွက် regen-cov အရေးပေါ်သုံးခွင့်ပြုချက် (EUA) ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့သည်။ ပြင်းထန် covid-19 သို့ဖွံ့ဖြိုးရန်အလားအလာမြင့်မားသူများကို post exposure prophylaxis (PEP) ပေးသည်။ ဤလူများသည်ကာကွယ်ဆေးအပြည့်အဝမရခဲ့ခြင်း (သို့) ကာကွယ်ဆေးအားလုံလောက်သောခုခံအားတုံ့ပြန်မှုပေးရန်မျှော်လင့်မထားခြင်း၊ sars-cov-2 ကူးစက်ခံရသူများနှင့်ထိတွေ့မိခြင်း (သို့) ရောဂါကူးစက်မှုသည်တူညီသောအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင် (သူနာပြုအိမ်သို့မဟုတ်ထောင်ကဲ့သို့) တွင်ဖြစ်ပွားသည်။ ကူးစက်ခံရသူများနှင့်ထိတွေ့မှုအန္တရာယ်မြင့်မားသည်။
8、Remdesivir：ရောဂါဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပထမဆုံးသောဆေးဝါးသစ်များကို COVID-19 ကုသရန်အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့သည်။
Veklury (remdesivir) ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Gilead အခြေစိုက် antiviral Institute မှတီထွင်သည်။ Veklury တွင်တိရစ္ဆာန်နှင့် vitro တွင်ကျယ်ပြန့်သောရောင်ခြည်ကာကွယ်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးပါ ၀ င်သောဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရှိပြီး Ebola ဗိုင်းရပ်စ်၊ SARS ဗိုင်းရပ်စ်၊ Marburg ဗိုင်းရပ်စ်၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါနှင့် SARS-CoV-2 ဗိုင်းရပ်စ်အပါအ ၀ င်ဗိုင်းရပ်စ်အသစ်ကူးစက်မှုများစွာကိုတိုက်ထုတ်နိုင်သည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ ၈ ရက် (အမေရိကန်စံတော်ချိန်) New England Journal of Medicine (NEJM) သည် National allergy and ကူးစက်ရောဂါ (NIAID) ၏အဆင့် ၃ actt-1 လက်တွေ့လေ့လာမှု၏နောက်ဆုံးရလဒ်များကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ဤသည်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အသစ်အဆုတ်ရောင်ရောဂါနှင့်ဆေးရုံတက်သောလူကြီးများအတွက် Gillie's Science ကိုလေ့လာရန် Gillie's Science ကိုလေ့လာရန်နှစ်ချက်ကန်းသော၊ placebo ထိန်းချုပ်ထားသောစမ်းသပ်မှုဖြစ်သည်။ ၂၀၂၀ မေလတွင် NEJM မှထုတ်ဝေခဲ့သောပဏာမရလဒ်များပေါ် အခြေခံ၍ ACTT-1 စမ်းသပ်မှု၏နောက်ဆုံးရလဒ်များသည် New Coronavirus pneumonia အတွက်ရလဒ်အကဲဖြတ်များစွာတွင် Reed သည် placebo နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဆေးခန်းသိသိသာသာအကျိုးရှိသည်ကိုပြသည်။ စမ်းသပ်မှု၏နောက်ဆုံးရလဒ်များအရ redcivir နှင့်ကုသသောလူနာများ၏ပြန်လည်နာလန်ထူချိန်သည်ယခင်ကအစီရင်ခံထားသည်ထက်ပိုမြန်သည်ကိုပြသည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ဆေးဝါးစက်ရုံ ၃၀ နီးပါးရှိပြီးယေဘူယျအားဖြင့် remdesivir ကိုထုတ်လုပ်သည်။
ယခင်က vir-7831 သို့မဟုတ် gsk4182136 ဟုလူသိများပြီး၎င်းသည် sars-cov-2 ကိုကာကွယ်ရန်တစ်ခုတည်းသော monoclonal antibody ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှဆေးပြောင်းရန်အလားအလာမရှိသော (spike) ပရိုတိန်း၏ epitope ကိုပစ်မှတ်ထားသည်။ Sotrovimab သည် xencor's xtend နည်းပညာကိုပေါင်းစပ်ထားပြီး sars-cov-2 ဒဏ်ခံရသောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းတစ်သျှူးအတွင်းသို့အကောင်းဆုံးထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်ရန်နှင့်သက်တမ်းတစ်ဝက်သက်တမ်းရှိသည်။ Preclinical data များအရဗိုင်းရပ်စ်သည်ကျန်းမာသောဆဲလ်များထဲသို့ ၀ င်ရောက်နိုင်ရုံသာမကရောဂါပိုးရှိသောဆဲလ်များကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်မေလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် GlaxoSmithKline နှင့် vir biotechnology တို့ကအမေရိကန် FDA သည် sotrovimab အရေးပေါ်သုံးခွင့်ပြုချက် (EUA) ကိုအပျော့စားမှအလယ်အလတ်ရှိသော covid-19 အရွယ်ရောက်ပြီးသူလူနာများအတွက် (အနည်းဆုံး ၁၂ ကီလိုဂရမ်နှင့်အလေးချိန် ၄၀ ထက်မနည်း) ကိုကုသပေးခဲ့သည်။ ဤလူနာများသည် sars-cov-2 ဗိုင်းရပ်စ်ကို positive စမ်းသပ်ခဲ့ပြီးဆေးရုံတင်ရခြင်း (သို့) သေခြင်းအပါအ ၀ င်ပြင်းထန် Covid-19 သို့တိုးတက်ရန်အလားအလာမြင့်မားသည်။
Etesevimab သည် recombinant human monoclonal neutralizing antibody ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် sars-cov-2 မျက်နှာပြင် spike protein receptor binding domain ကို high affinity နှင့် specificity တို့နှင့်ပေါင်းစပ်စေပြီးဗိုင်းရပ်စ်နှင့် host cell မျက်နှာပြင်လက်ခံသူ ACE2 တို့အကြားထိထိရောက်ရောက်တားဆီးနိုင်သည်။ R & D အဖွဲ့သည်တစ်သျှူးများပျက်စီးခြင်းကဲ့သို့ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများကိုဖယ်ရှားရန်သဘာဝလူသား IgG1 antibody သို့အချက်ပြောင်းခြင်းကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
Bamlanivimab သည် sars-cov-2 spike protein ကိုဆန့်ကျင်သော IgG1 monoclonal antibody အစွမ်းထက်ပြီး neutralizing ဖြစ်စေသည်။ ၎င်း၏သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်ဗိုင်းရပ်စ်အားလူသားများဆဲလ်များထဲသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်နှင့်ဗိုင်းရပ်စ်ကိုချေမှုန်းရန်နှင့် Covid-19 ကိုကာကွယ်ရန်နှင့်ကုသရန်အလားအလာရှိသည်။ Bamlanivimab သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ပထမဆုံး covid-19 ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလူနာများမှစုဆောင်းထားသောသွေးနမူနာမှဖော်ထုတ်ထားသောပဋိပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ ၉ ရက် (အမေရိကန်အရှေ့ပိုင်း) တွင် Eli Lilly နှင့်ကုမ္ပဏီတို့သည် US FDA မှ antibody ပေါင်းစပ်ကုသခြင်းကိုကုသပေးကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ EUA) သည်အသက် ၁၂ နှစ်နှင့်အထက်ရှိသော Covid-19 လူနာများကိုအပျော့စားနှင့်ပြင်းထန်စွာဆေးရုံတက်ရန်ဖြစ်နိုင်ချေမြင့်မားသောကုသမှုအတွက်ဖြစ်သည်။
Bamlanivimab တစ်ခုတည်းကိုနိုင်ငံများစွာ၌ခွင့်ပြုထားပြီး၊ bamlanivimab နှင့် etesevimab ပူးတွဲအစီအစဉ်ကိုအမေရိကန်နှင့်အီတလီတို့တွင်အရေးပေါ်သုံးရန်ခွင့်ပြုထားသည်။
Favipiravir သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကုဒ် T-705 ကို FUJIFILM Toyama Chemical Co. , Ltd. , Japan, FFTC, Japan မှတီထွင်သောဆေးသည်ဂျပန်တွင်ဆေးယဉ်ပါးတုပ်ကွေးကိုကုသရန် antiviral ဆေးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ် (Ebola virus)၊ COVID-19 (SARS-COV-2), Lhasa virus (T-705) နှင့် Toyama အပါအ ၀ င်အခြားဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုများကိုကုသရန်လေ့လာနေသည်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာစု (mers COV)
၂၀၂၀ ခုနှစ် ၀၆ တွင် Reed နှင့် Remdesivir (favipiravir) ကိုပြင်းထန်သော coronavirus (COVID-19) ကူးစက်မှုကိုကုသရန်အိန္ဒိယ၌အတည်ပြုခဲ့သည်။
favipiravir ပါသောလူကြီးများအတွက်ပုံမှန်ကုသမှုသည် ၅ ရက်ဖြစ်သည်။ ပထမနေ့တွင် ၁၆၀၀ မီလီဂရမ်၊ တစ်နေ့နှစ်ကြိမ်၊ ဒုတိယနေ့မှ ၅ ရက်အထိ ၆၀၀ မီလီဂရမ်ကိုတနေ့နှစ်ကြိမ်။
Favipiravir ၏ယေဘူယျဗားရှင်းကိုထုတ်လုပ်ရန်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ဆေးဝါးစက်ရုံ ၁၀၀ နီးပါးရှိသည်။
COVID-19 ကူးစက်မှုသည်ခန္ဓာကိုယ်ခုခံအားစနစ်ကိုတိုက်ခိုက်စေပြီးရောင်ရမ်းမှုကိုဖြစ်စေသည်။ လူနာများသည်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုတိုက်ဖျက်ရန်ခုခံအားကျဆင်းစေသောဆေးများကိုသုံးရန်လိုသည်။
၎င်းသည်လျင်မြန်သောရောဂါတိုးတက်မှု၊ ပြင်းထန်။ အန္တရာယ်ရှိသောပြင်းထန်သောလူနာများအတွက်သင့်တော်သည်။
၎င်းကိုလျင်မြန်သောရောဂါတိုးတက်မှုရှိသောသာမန်နှင့်ပြင်းထန်သောလူနာများအတွက်အရေးပေါ်သုံးနိုင်သည်။ အကြံပြုထားသောသောက်သုံးသောပမာဏသည်သာမန်အမျိုးအစားအတွက် ၂၀ မီလီလီတာနှင့်လေးလံသောအမျိုးအစားအတွက် ၄၀ မီလီမီတာဖြစ်ပြီးလူနာ၏အခြေအနေတိုးတက်ကောင်းမွန်လာသည်နှင့်အညီတစ်နေ့လျှင်ထပ်မံထိုးသွင်းနိုင်ပြီးစုစုပေါင်းအကြိမ်အရေအတွက် ၅ ကြိမ်ထက်မပိုစေရ။
Tocilizumab ကိုအဆုတ်နှင့်ပြင်းထန်သောလူနာများတွင်ကျယ်ပြန့်စွာတွေ့ရှိရသောလူနာများတွင်သုံးနိုင်ပြီး IL-6 ကိုဓာတ်ခွဲခန်းတွင်တိုးလာသည်။ တိကျသောအသုံးပြုမှု - ပထမဆေးသည်4~ 8mg / kg၊ အကြံပြုထားသောဆေးသည် 400mg၊ ၀.၉% ပုံမှန်ဆားရည်ကို ၁၀၀ml သို့ရောနှောပြီးဆေးသွင်းချိန်သည် ၁ နာရီထက်ပိုသည်။ ပထမအကြိမ်ကုသရာတွင်အာနိသင်မကောင်းသူများအတွက်ပထမအကြိမ်ဆေးထိုးပြီး ၁၂ နာရီအကြာတွင် ၁၄ ကြိမ် (ဆေးသည်ယခင်ကဲ့သို့ဖြစ်သည်)၊ ဆေးပမာဏကို ၂ ဆအထိအများဆုံးပေးနိုင်သည်။ တစ်ခါသောက်ဆေးပမာဏသည် ၈၀၀ မီလီဂရမ်ထက်မပိုပါ။ မတည့်တုံ့ပြန်မှုကိုသတိထားပါ။ တီဘီကဲ့သို့တက်ကြွသောကူးစက်ရောဂါရှိသူများအားတားမြစ်ထားသည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ၂၅ ရက်၊ ၂၅ ရက်နေ့တွင် Roche ကအမေရိကန်နိုင်ငံ FDA သည်၎င်း၏အကြောသွင်းဆေး IL-6 receptor inhibitor Actemra/RoActemra (tocilizumab) အရေးပေါ်သုံးခွင့်ပြုချက် (EUA) ကို COVID-19 (COVID-19) ကူးစက်ခံရသောလူကြီးများနှင့်အသက်ကြီးသောကလေးများအားကုသပေးသည်။ နှစ်ခုနှင့်အထက် ဤလူနာများသည် systemic corticosteroids ကိုလက်ခံရရှိပြီး adjuvant oxygen ထောက်ပံ့မှု၊ မထိခိုက်စေသောသို့မဟုတ်ထိုးဖောက်နိုင်သော mechanical ventilation (သို့) extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) ကိုလိုအပ်သည်။
Itolizumab သည် immunomodulatory anti-cd6 IgG1 monoclonal antibody ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်အိန္ဒိယ၌စျေးကွက် ၀ င်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ပထမဆုံးသော CD6 monoclonal anti-antibody လည်းဖြစ်သည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ၀၇၊ ၁၀ ရက်နေ့တွင်အိန္ဒိယဆေးဝါးကုမ္ပဏီ Bicon သည်အိန္ဒိယဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှု (DCGI) မှအသစ်ဖြစ်ပေါ်သော ALZUMAb (Itolizumab) 25mg/5mL အကြောဆေးကို New အတွက်ဖြစ်ပေါ်သောအလယ်အလတ်မှပြင်းထန်သောပြင်းထန်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာစု (ARDS) ကိုကုသရန်ခွင့်ပြုကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ Coronavirus အဆုတ်ရောင်ရောဂါ (COVID-19) ကို cytokine release syndrome (CRS) ဖြင့်ကုသသည်။
Baricitinib သည်ရောင်ရမ်းရောဂါအမျိုးမျိုးကိုကုသရာတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသော JAK inhibitor ဖြစ်သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက်နေ့တွင်အမေရိကန် FDA သည် baricitinib ၏အရေးပေါ်သုံးခွင့်ပြုချက် (EUA) ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးယခုအခါ baricitinib ကိုဆေးရုံတင်ထားရသောလူကြီးများနှင့်ကလေးအသက် Covid-19 လူနာများအားအပိုဆုအောက်ဆီဂျင်ထောက်ပံ့မှုကိုတစ် ဦး တည်းသုံးရန်ခွင့်ပြုလိုက်သည်။ မပျံ့နှံ့ရန်သို့မဟုတ်ထိုးဖောက်နိုင်သောစက်မှုလေဝင်လေထွက် (သို့) extracorporeal membrane အောက်ဆီဂျင် (ECMO) ။
ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော EUA အရ baricitinib ကို veklury ဖြင့်စီမံရန်မလိုတော့ပါ။
Baricitinib သည် COVID-19 ကုသမှုအတွက် FDA မှတရားဝင်အတည်ပြုခြင်းမရှိသေးပါ။
6、Tofacitinib（ ပါးစပ်ဆေးပြာ ）
JAK inhibitor ဖြစ်သော Tofacitinib သည် COVID-19 လူနာများကိုကုသရန်ခွင့်ပြုချက်သို့မဟုတ်ခွင့်ပြုချက်မရသေးပါ။
၂၀၂၁ ခုနှစ်ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက်နေ့တွင်ကိုဗစ် -၁၉ အဆုတ်ရောင်လူနာအားကုသရာတွင်အဆင့် ၃ လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုရပ်တန့် covid (nct04469114) ပါးစပ် JAK inhibitor tofacitinib ကိုကုသသောရလဒ်များကို International Medical Journal New England Journal of Medicine (NEJM) ၌ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
ရလဒ်များအရ tofacitinib သည် placebo နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက Covid-19 ဆေးရုံတက်လူနာများတွင်သေဆုံးခြင်း (သို့) အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာချို့တဲ့ခြင်းအန္တရာယ်ကိုသိသိသာသာလျော့ကျစေကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။
ကုသမှုအခြေခံမူ - ရှုပ်ထွေးမှုများကိုကာကွယ်ကုသပါ၊ အခြေခံရောဂါများကိုကုသပါ၊ ဒုတိယအဆင့်ကူးစက်မှုကိုကာကွယ်ရန်နှင့်အချိန်မီကိုယ်တွင်းအင်္ဂါလုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုပံ့ပိုးပေးပါ။
１.　Glucocorticoid ကုသမှု: Methylprednisolone
အောက်ဆီဂျင်အညွှန်းကိန်းတဖြည်းဖြည်းယိုယွင်းပျက်စီးနေသောလူနာများအတွက်လျင်မြန်သောပုံရိပ်ဖမ်းခြင်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်ရောင်ရမ်းမှုတုံ့ပြန်မှုကိုအလွန်အကျွံဖွင့်ပေးခြင်းဖြင့် glucocorticoids ကိုကာလတို (ယေဘူယျအားဖြင့် ၃ ရက်မှ ၅ ရက်၊ ၁၀ ရက်ထက်မပိုစေပါ) ။ အကြံပြုထားသောပမာဏသည် methylprednisolone ၏ 0.5 ~ 1mg / kg / day နှင့်ညီမျှသည်။ ၎င်းသည်ခုခံအားကျဆင်းစေသောအာနိသင်ကြောင့် glucocorticoids ပမာဏများစွာပါ ၀ င်ခြင်းကြောင့်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရှင်းလင်းရေးကိုနှောင့်နှေးစေနိုင်သည်ကိုသတိပြုသင့်သည်။
２.　အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအထောက်အပံ့: အောက်ဆီဂျင်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အသက်ရှူကိရိယာများလိုအပ်သည်
Transnasal မြင့်မားသောအောက်ဆီဂျင်ကုထုံး (သို့) မထိခိုက်သောလေ ၀ င်လေထွက်ကောင်းစေခြင်း
လေကြောင်းလမ်းကြောင်းစီမံခန့်ခွဲမှု၊ လိုအပ်သောအခါ tracheoscopy ဖြင့်လေ ၀ င်လေထွက်ကိုစိုထိုင်းဆဖြစ်စေခြင်း၊
Extracorporeal အမြှေးပါးအောက်ဆီဂျင် (ECMO)
အရေးပေါ် - အခြားကုထုံး
သင်သည်ဤအပိုင်း၏အကြောင်းအရာများကို သုံး၍ လူနာသည် "ဆေးအရင်းအမြစ်များသဲကန္တာရ" တွင်ရှိနေပြီဟုယုံကြည်လျှင် ကျေးဇူးပြု၍ သင်ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်သည်ဟုယုံကြည်ပါ။
လူနာသည်အဖျားကြီး။ (၃၈.၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထက်) ရှိလျှင်လက္ခဏာပြကုသမှုခံယူပါ။
ဂျစ်ပဆမ်ရှိလျှင်ဂျစ်ပဆမ် ၁၅-၃၀ ဂရမ်ကိုရေနှင့်ပြုတ်ပါ၊ ဂျစ်ပဆမ်ကိုစစ်ထုတ်ပါ၊ နံနက်တစ်ကြိမ်နှင့်ညနေတစ်ကြိမ် (အစာစားပြီးမိနစ် ၄၀)၊ ညင်သာစွာ ယူ၍ သုံးရက်ကြာသည်။ ရောဂါလက္ခဏာများသက်သာသော်လည်းမသက်သာလျှင်ဒုတိယကုသမှုကိုဆက်လက်ခံယူပါ။
အချို့အပင်များတွင်ပါဝင်ပစ္စည်းများသည် Radix Bupleuri extract ဖျော်ရည်သောက်ခြင်းကဲ့သို့ချွေးထွက်ခြင်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကိုနိမ့်ကျစေသည်။
အအေးခံဆေးမရှိလျှင်ရေနွေးကိုမျက်နှာသုတ်ပုဝါဖြင့် (ရေအပူချိန် ၄၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ခန့်) ထားပြီးလက်များ၊ နဖူး၊ ခြေဖဝါး၊ လက်ဖဝါးနှင့်အခြားအစိတ်အပိုင်းများကိုသုတ်ပေးပါကအအေးဓာတ်ကိုသက်ရောက်မှုရှိစေနိုင်သည်။
အချို့သောအပင်များတွင်ပါ ၀ င်သောအစိတ်အပိုင်းများမှာဘက်တီးရီးယားနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်များကိုတားဆီးပေးသည့်လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကိုဗက်တီးရီးယားများနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်များကိုတိုက်ထုတ်ရန်အရည်နှင့်ယူနိုင်သည်။
Strobilanthes cusia (Nees) Kuntze ဓါး
Heartleaf houttuynia ဆေးဘက်ဝင်ဓါး
Polygonum tinctorium ဓါး
Isatis indigotica ကံကောင်းခြင်းဓါး
Indigofera tinctoria Linn ပင်စည်နှင့်အရွက်
အချို့အပင်များတွင်ပါ ၀ င်သောအစိတ်အပိုင်းများသည်ခုခံအားကျဆင်းစေသောလုပ်ဆောင်ချက်ရှိသည်။ ရောင်ရမ်းမှုကိုတိုက်ထုတ်ရန်အရည်နှင့်ထုတ်ယူနိုင်သည်။
Glycyrrhiza uralensis Fisch ဖြစ်သည်
Zingiber အရာရှိရုံး Rosc
Belamcanda chinensis （L. ） Redoutéဖြစ်သည်
အပင်ကိုချေဖျက်ပြီးမိနစ် ၃၀ ကြာရေစိမ်၊ အညစ်အကြေးများကိုစစ်ထုတ်ပြီးယူပါ။
Aster tataricus L.f။
အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာဆေးရုံတွင်ကုသမှုခံယူရန်ဖြစ်သည်။ ဒုတိယအချက်မှာအိမ်သုံးအောက်ဆီဂျင်မီးစက် ၀ ယ်သည်။ နောက်ဆုံးအနေနှင့်လျှပ်စစ်အသိပညာရေမရှိသောနည်းပညာသည်လူများအတွက်အတော်လေးအန္တရာယ်ရှိသည်။ အများအားဖြင့်မိသားစုများအတွက်အောက်ဆီဂျင်လုံလောက်စွာရရှိရန်ခက်ခဲနိုင်ပြီးနိုင်ငံတကာတွင်အနည်းဆုံးဆေးဘက်ဝင်အောက်ဆီဂျင်ပါဝင်မှုစံသည် ၈၂%ကျော်ရှိသည်။
အကယ်၍ လူနာသည်ပြင်းထန်စွာဖျားနာပါကအောက်စီဂျင်ကိုကိုယ်တိုင်လုပ်ပါ၊ အောက်ပါနည်းပညာအချက်များကိုလိုက်နာပါ။
DC voltage သည် 30V ထက်မပိုပါ၊ ၎င်းသည်အတော်လေးလုံခြုံသည်။ Electrolytic အောက်ဆီဂျင်ကိုကြိုတင်ယူထားပါ။
လျှပ်ကူးပစ္စည်းအဖြစ်ကြေးနီပြားကိုရွေးချယ်ပါ။ အပြုသဘောဆောင်သောလျှပ်ကူးပစ္စည်းသည်အောက်ဆီဂျင်ကိုထုတ်ပေးပြီးအနုတ်လက္ခဏာလျှပ်ကူးပစ္စည်းသည်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကိုထုတ်ပေးသည်ကိုသတိပြုပါ။ electrolytic ရေအတွက်စည်နှစ်ချောင်းရှိသည်၊ အလယ်ကိုပိုက်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားပြီး၊ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်ရန်အနုတ်လက္ခဏာလျှပ်စီးကြောင်းပါသောစည်ကိုအပြင်ဘက်တွင်ထားရှိသည်။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကြိုတင်မီးသည်လောင်ကျွမ်းပြီးပေါက်ကွဲလိမ့်မည်၊ ပတ် ၀ န်းကျင်၌မီးအရင်းအမြစ်မရှိရ။
Electrolytic water အောက်ဆီဂျင်ထုတ်လုပ်မှု（Electrolytic water oxygen production）
စာရွက်စာတမ်းဗားရှင်းနံပါတ်သည်အပိုင်းငါးပိုင်းပါ ၀ င်သည်။
အပိုင်း ၁ သည်စီမံကိန်းအမည်ဖြစ်သည်
အပိုင်း ၂ သည်စာတမ်း၏ဖော်ပြချက်ဖြစ်သည်
အပိုင်း ၃ သည်ဘာသာစကား၏အဓိကဗားရှင်းနံပါတ်ဖြစ်သည်။ ရိုးရှင်းသောတရုတ်ဗားရှင်းနံပါတ်သည် "0"
အပိုင်း ၄ သည်ရက်စွဲဗားရှင်းနံပါတ်ဖြစ်သည်
အပိုင်း ၅ သည်အဆင့်ဗားရှင်းနံပါတ်ဖြစ်သည်
Prev：មគ្គុទ្ទេសក៍លៀនធី៖ ការថែទាំគ្រួសារនៃការឆ្លងមេរោគកូវីដ ១៩
Next：ພຽງແຕ່ຜູ້ຊາຍທີ່ຢູ່ລຽບ: ເບິ່ງແຍງບ້ານສໍາລັບໄວຣັດໂຄວິດ -19